निन्द्रा लाग्दैन ? क्यान्सर पनि हुन सक्छ – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/निन्द्रा लाग्दैन ? क्यान्सर पनि हुन सक्छ
यतिमात्र होइन राति निन्द्रा नलाग्नेहरुमा आत्महत्याको विचार आउनेसम्मको अवस्था आउ“छ । तर निन्द्रा पर्याप्त पुगेमा राम्रोसंग पाचन प्रकृया चल्ने, शरीरबाट अनावश्यक तत्व बाहिर फ्याक्ने, हर्मोन उत्पादन गर्ने र रोगसंग लड्ने क्षमतामा वृद्धि समेत गर्दछ ।
गहिरो निन्द्रा लाग्नु, सपना देख्नु दुबै शरीरका लागी फाइदाजनक छ । यसले मस्तिष्क र शरीरलाई रिचार्ज गर्छ । स्मरण शक्तिलाई बलियो बनाउ“छ ।